Isiphequluli se-Tor: Izinhlobo ezintsha zitholakalela ukuqala i-2020 | Kusuka kuLinux
Tor Browser kuyinto enhle Isiphequluli sewebhu esiphambanweni lokho kwenza kube lula ngathi ukufihla kanye / noma ukufihla ubunikazi bethu kunethiwekhi, nayo esuselwe kuyo I-Mozilla Firefox.
Futhi lokhu kungenzeka, sibonga iqiniso lokuthi liyayisebenzisa ukuxhumana kumawebhusayithi ahlukene, ngakho-ke icishe ingabonakali ngokunikeza i- umzila ongaziwa ngokusebenzisa Ama-proxy server (amabhuloho).
Konke lokhu kwenza Tor Browser uhlelo lokusebenza oluhle oluvimbela i- ukuxhumana kwewebhu kulula ukulandelela, ngokugwema kahle ukuhlaziywa kwethrafikhi kwangaphandle, phakathi kwezinye izinto, ukuvimbela umuntu osemgwaqweni ekubeni nethuba lokwazi eyethu Isikhangiso se-IP o geolocate us.
1 Siyini isiphequluli seTor?
2 Isiphequluli se-Tor: Izinhlobo ezintsha ziyatholakala
2.1 9.0.4 (Uhlobo oluzinzile)
2.2 I-9.5a4 (Alpha Version)
Siyini isiphequluli seTor?
Tor Browser Inezinto eziningi ezithokozisayo ongazinikeza nokwazi, ngenxa yalokho, sincoma ukuthi ufunde izindatshana ezi-2 ezedlule ngakho (Isigaba 1 y Isigaba 2) ukuze ungene kulolu hlelo lokusebenza, ngoba le ndatshana igxile, ngaphezu kwakho konke, kufayela le- izindaba zezinguqulo ezintsha ezitholakalayo lokhu ngonyaka we-2020.
Noma kunjalo, kufanelekile caphuna ingcaphuno elandelayo kwesokuqala, ukunciphisa isidingo sokuyifunda:
"Impela bonke ubuchwepheshe be-Tor Browser bungasetshenziswa ngokwehlukile ku-Operating System ye-GNU / Linux, ngomphathi wokuqhafaza obizwa nge-Vidalia kwisiphequluli se-Intanethi esisebenzisanayo (njengeMozilla Firefox) esineTorbutton (Complement / Plugin) esivumela ukuthi siyisebenzise ku isiphequluli sakho.
Kodwa-ke, kusiphequluli sewebhu seTor Browser, abadali bayo bakwazile ukwenza lula konke, baklama uhlelo lokusebenza oluqinile futhi oluqinile (iphakethe) ngendlela ebanzi, okungukuthi, ngakho konke okudingekayo ukusebenza ngokushesha kunoma yikuphi ukusatshalaliswa. Futhi usebenzisa izinguqulo ezihamba phambili nezakamuva kakhulu zeMozilla Firefox, ukuze usebenzise ngokunenzuzo izinsiza zobuchwepheshe zezinye zeziphequluli zeWebhu ezihamba phambili kuFree World."
Ngokufingqa, i-Tor Browser Browser ngokusho konjiniyela bayo yile:
"Isoftware yamahhala nenethiwekhi evulekile esiza ukuvikela kuma-analytics omgwaqo, uhlobo lokuqashwa kwenethiwekhi okusongela inkululeko yomuntu siqu nobumfihlo, imisebenzi yebhizinisi eyimfihlo nobudlelwano, nokuphepha kombuso".
Isiphequluli se-Tor: Izinhlobo ezintsha ziyatholakala
9.0.4 (Uhlobo oluzinzile)
Isisekelo seMozilla Firefox esisetshenzisiwe manje yi- 68.4.1 umqashi
Kufaka phakathi indawo yokulungisa ye- inkinga yezokuphepha ebucayi ngaphansi kwekhodi I-CVE-2019-17026.
Ilondoloza ushintsho oluyisisekelo nolubucayi kusuka kuzinguqulo zangaphambilini ze- Uchungechunge lwe-9.0, engaziwa ngesixhumanisi esilandelayo: I-Changelog 9.0.X.
I-9.5a4 (Alpha Version)
Kufaka phakathi izibuyekezo ezibalulekile nokulungiswa kwezokuphepha ezakhelwe kusisekelo seMozilla Firefox (68.4.0esr ne-68.4.1esr) esetshenzisiwe.
Inenguqulo ebuyekeziwe enguqulweni yayo yakamuva, yesandiso se-NoScript.
Hlanganisa isisombululo senkinga ne-Reproducible Builds eshiwo kusixhumanisi esilandelayo: I-Tor Browser i-9.0.1
Nota: Uhlobo U-Alfa de Tor Browser Kuyinto a Uhlobo lokuhlola kubasebenzisi abafuna ukusisiza zama izici ezintsha. Kubo bonke abanye abantu, sincoma ukulanda inguqulo ezinzile yakamuva kunalokho.
Noma yimuphi omunye Ulwazi Olwengeziwe cishe Tor Browser kulula ukuthola nokufinyelela ngokuchofoza kufayela lakho le- Iwebhusayithi esemthethweni, nayo enesiphetho esikhulu nesikhulu isigaba semibhalo lapho kuchazwa izinto eziningi ezifana nezakhe ukufakwa ohlelweni ngalunye olusebenzayo, its ukusetha nokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, inendlela elula kodwa esebenzayo blog lapho beshicilela khona ngezikhathi ezithile izindaba zokukhishwa okusha ngakunye.
Siyethemba ukuthi lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Tor Browser», okuhle kakhulu «Navegador web multiplataforma» lokho kusisiza fihla futhi / noma ufihle ubunikazi bethu kunethiwekhi, nayo esuselwe ku- «Mozilla Firefox», inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isiphequluli se-Tor: Izinguqulo ezintsha ziyatholakala ukuqala ngo-2020
Ilungile, inguqulo yokuqala ezinzile yeFedora CoreOS